Soo dejisan Spotflux 3.1.0.158 – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilSpotflux
Qeybta: VPN iyo Wakiil
Spotflux – software ah helitaanka internet-ka si qarsoodi ah oo amaan ah. software The rakibtay darawalka gaarka ah ee network in nidaamka oo sir u di’iyaa kuwa gaadiidka internet-ka iyada oo daruur Spotflux. Spotflux hubinayaa ku xirmooyin, kuwa u taga inay dadka isticmaala ee fayrasyada, furin, advertising iyo modules kale oo aan habboonayn. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto Guda ah gaadiidka kasta oo hor istaagay. Spotflux waa inay awoodaan inay sir iyo kalsooni la xidhiidha internetka dhex LAN ama Wi-Fi.
Anonymous oo ammaan helaan internet-ka
Nadiifiyaa ka xirmooyin soo socda ka hanjabaado kala duwan
ISBEDELKA LA-IP address
Views ee abuse of gaadiidka hor istaagay
Soo dejisan Spotflux
Faallo ku saabsan Spotflux
Spotflux Xirfadaha la xiriira
Hotspot Shield – barnaamij softiweer ah isku xirnaanshaha la ilaaliyo iyo fadhiyada aaminka ah ee shabakada. Sirta ah ee hawlgallada qadka ee internetka waxaa lagu gaaraa isbedelka cinwaanka IP-ga isticmaale-yaha.
Software ee shaqada ammaan ah oo fudud oo VPN server-. Sidoo kale software awood u si ay u helaan in ay goobaha u xiran yihiin.
MODO – tifaftire awood u leh muuqaalka 3D iyo abuurista waxyaabaha ku jira dhijitaalka. Softiweerku wuxuu leeyahay aalado loogu tala galay samaynta walxaha naqshadaynta qaababka kala duwan.
5KPlayer – ciyaar yahan warbaahin ah oo leh adeegyo iyo qalab waxtar leh. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo fiidiyowyo adeegyo fiidiyow caan ah.